Ukususela kumaxesha amandulo, oogogo kunye nogogo-makhulu baye bazinyameka iinwele zabo, basebenzisa izigulane zabantu kunye nokulungiselela imaski ekhaya. Okwangoku, kukho iintlobo ezahlukeneyo zeenwele ezivela kwimveliso yemvelo, ongayilungiselela lula ekhaya.
Ngokuqhelekileyo iinwele ezinjalo ezenziwe yizandla azikho ngaphantsi kweemaski zokuzicoca ezisebenzisayo ezisetyenziselwa ubuhle beentoni. Kodwa ungalibali ngokutya kwakho. Emva koko, ngokukhawuleza ukuphucula imeko kwaye ukuphucula imeko yeenwele kungenziwa ngokutshintsha kwondlo. Okokuqala, simele sikhumbule ukuba ekudleni kwakho kufuneka ukuba yi-biotin kunye ne-folic acid, ekhusela ukulahleka kweentlungu nokuqinisa izipikili. Unokuzifumana esibindi, amaqanda, imvubelo, irayisi ebomdaka, i-soy kunye neesinkwa. Kwakhona uzame ukutyisa ijusi le-orange, iibhotile, iintonga ze-broccoli kunye neziqhamo ezomileyo, inyama kunye nentlanzi. Ukulungiselela iikhosi ze sibini okanye zokuqala, sebenzisa ioli yomnqumo yokunyusa okubandayo, kuba iqukethe iivithamini A kunye ne-E ezininzi, kwaye ngaphandle kwayo kubaluleke kakhulu kunokuba ilanga lombane. Ngoku makhe sithethe malunga naluphi uhlobo lwesigqubuthelo seenwele ezivela kwimveliso yendalo engcono ukhetha. Nazi imizekelo yezinye zokupheka eziza kukunceda ukujamelana neengxaki zakho zeenwele okanye nje ukuphucula ukubonakala kwazo kunye nemeko.
Ngeenwele ezilahlekileyo zikhanyayo kwaye ziluhlaza, unokuncoma ukwenza ukunyuswa okukhethekileyo kwe-sandalwood okanye i-licorice ingcambu, igcwele ilitha enye yamanzi kwaye ihlanjululwe ngepunikiyuni enye yeviniga. Konke oku kufakelwe imizuzu eyi-15. Oku kufakwa kufuneka kuhlanjwe iinwele.
Ukuba ufuna ukuqinisela iinwele zakho, zenze ziqine, ngoko i-aloe juice okanye i-tincture evela kumagqabini ayo kuya kukunceda. Ukuze wenze i-tincture, nqabisa amaqabunga e-aloe uze ugxininise kwi-40% yotywala.
Kwakhona kunceda ukuqinisa iinwele ze-anyanisi. Iibhubhu ezimbini kufuneka zichithwe zize zithululelwe kunye neziglasi ze-alcohol okanye i-vodka. I-tincture elungiselelwe kufuneka ixutywe kwisikratshi okungenani kanye ngosuku.
Kukho imaski yobhiya exutywe ne-yolk enye. Lo mxube usetyenziselwa ukuhlambulula iinwele ezinqabileyo, zihlanganiswe ngentloko kunye nepakethi okanye ifilimu yokutya, zifakwe kwiluyile kwaye zishiye imizuzu engamashumi amathathu. Emva koko imaski iyahlanjwa ngamanzi afudumeleyo.
Abo bantu abanomdaka banokukucebisa ukuba udibanise ijusi ye-anyanisi ngesabelo esilinganayo se-vodka okanye i-kerosene.
Ewe, ukuba ufuna ukukhawuleza ukukhula kweenwele zakho, sebenzisa imaski yentyatyambo etyumkileyo. Kwakhona, i-mask ne-garlic ecikiweyo, kodwa kufuneka isetyenziswe ezimbini iiyure ngaphambi kokuhlamba intloko.
Isisombululo esihle kakhulu sokulahleka kweenwele yilona isiski esilandelayo: xuba esinye isipuni sesosi kunye nepunipoon ye juice ye-aloe, yongeza i-yolk yeqanda kule mxube. Umaski ophumela kufuneka usetyenziswe kwizinwele kwaye maye ume imizuzu engama-20. Emva koko kufuneka uhlabe esinye isikhuphaza entloko, uze uhlanjululwe kunye ne-decoction yemifuno.
Eyona nto ibaluleke kakhulu imaski eyenziwe ngobumba, elula kakhulu ukwenza ekhaya. Ukwenza oku, udongwe luya kubunjwa ukhilimu omuncu kwaye usetyenziswe kwizinwele, kwaye emva kwemizuzu eyi-15 uhlanjwe.
Ukuba unezinwele eziqhelekileyo okanye ezinomileyo, ke kuwe i-mask efanelekileyo yeenwele ekhaya i-mask yobusi, kunye nesiskiti esekelwe kwisonka sesonka. Ukulungiselela kwabo uya kufuna enye i-teaspoon yooju ehlanganiswe kunye neyipuni yeyipuni yeoli ye-castor.
Umxube olungiselelwe kufuneka uphelelwe kwaye usetyenziswe kwizinwele kwiyure enye. Eyona nto, ukuze ulungiselele isiski kwisonka se-rye, kubalulekile ukutyumza isonka se-rye, uthele amanzi aphelayo kwaye unike ubunzima bokubanika iiyure ezimbini ukuya kweyure. Emva koko i-mask isetyenziswe kwizinwele ezimbini iiyure.
Umnini weenwele ezifanayo ezifanelekileyo zifanelekile kwi-mask esekelwe ngobusi. Ukuze wenze ukuba udinga ukuthatha iipunipoli ezimbini zobusi uze uzixube kunye nezikhuni ezimbini. Inketho efanelekileyo kukuba uyishiya imaski kwizinwele zakho zobusuku.
Ewe, ukuba awukwazi uhlobo lwakho lweenwele, sebenzisa enye yemaski ephela jikelele eya kuhambelana nayiphi na inwele.
Hlanganisa enye ifuni ye-oyile yemifuno kunye ne-yolk yolunye yelinen, cwina i-mask kwizinwele zakho malunga nemizuzu engama-30 ukuya kwimizuzu engama-40, uze uhluthise iinwele nge-infusion ye-herbs.
Esinye isipuni se-rum sidibene kunye nepunipoon yeoli ye-castor, gubungela kwi-scalp. Emva kweyure enye, yihlambe.
Hlanganisa i-teaspoon eyodwa yejisi le-aloe kunye ne-teaspoon eyodwa yejisi lemon, enye i-clove eqoshiwe yegalikhi kunye ne-yolk enye. Faka le mxube kwiingcambu zeenwele, ngaphandle kokulibala ukuzihlalisa. Emva kwemizuzu engama-30 ukuya kwe-40, sukuma.
Into ephambili yokukhumbula kukuba ukubunjwa kweemaski kufuneka kutshintshwe, ngaphandle koko ukusetyenziswa rhoqo kwesosikiti esifanayo kukukhuthaza ukunyuka kweenwele, kwaye kunciphise ukuphumelela kwalokhu okanye loo maski. Kwaye akukho mzobo ongcono weenwele ekhaya ngaphandle kokunyamekela nokunyamekela.
Konke malunga neenwele eziphathekayo kumbala kule ekwindla nasebusika
Iimpawu zeentlobo zezilwanyana kunye neenwele zeenwele - iifoto zemodeli eyaziwayo
Umbala wesikhumba se-Ash-blond
Imaski ezenziweyo kunye nezikratshi ze-scalp
Unokukhetha njani i-balm efanelekileyo yeenwele?
Imigaqo yokunyanga kwezifo zesikhumba
Indlela yokutya ngexesha lokukhulelwa
Unokunyusa njani ukunyaniseka kwesikhumba?
Buckwheat kunye nenkomo kwi-multivark
Indlela yokukhuphela i-ICQ kwifowuni yakho
Indlela yokuvuselela umntwana owonakele?
I-baked custard i-raspberry cream
Masks ebusweni, ekhaya
U-Anita Tsoy wayemangalelwa ngokuzonwabisa ngelilanga leendaba zokufa kukaJeanne Friske
IHoroscope yoSuku lwe-Valentine ka-2014
I-fushters eluhlaza kwaye ekhanyayo kwi-yogurt
Ungathenga njani itan ekhaya?
Bhisikidi ze-ts'okile kunye ne-oatmeal
2 Iindlela Zokuvuka Ekuseni Ngeenwele Ezibukhali
Ubugcisa bokuthenga okulungileyo: njani kunye nendlela yokuthenga kuZara, Asos, H & M
Yintoni efanelekileyo yokugqoka kule busika